Izinto ezi-5 obungazi ngekhamera yakho yezokuphepha | Izindaba zamagajethi
Izinto ezi-5 obungazi ngekhamera yakho yezokuphepha
Izindaba zamagajethi | | Gadgets
Ukuvikelwa kwekhaya lakho, ibhizinisi noma ihhovisi kubalulekile. Kulokhu kunezinhlelo ze-alamu ezihambisana namakhamera okuqapha lokho vumela ukugcina izindawo ezahlukahlukene zivikelekile futhi zithole ngesikhathi esifanele ukungena kwabahlaseli ngesikhathi sangempela. Noma kunjalo, asekhona namanje izinto ongazazi ngekhamera yakho yezokuphepha futhi lokho kuzenze zaba ithuluzi elinemisebenzi ehlukahlukene.
1 Amakhamera ukuze kuzuze ukuphepha
2 Izinto obungazazi mayelana nekhamera yakho yezokuphepha
3 Izinzuzo zokusebenzisa ikhamera yokubhekwa
Amakhamera ukuze kuzuze ukuphepha
Amakhamera ezokuphepha asebenza njenge- ividiyo yesekethe evaliwe exhunywe ohlelweni lokubhekwa, ebonwa kuphela ngabantu abanokufinyelela okuvunyelwe. Umsebenzi wawo ukurekhoda imicimbi ngesikhathi sangempela, uthathe izithombe kusuka ezinhlangothini ezahlukene nase sakaza bukhoma okwenzekayo ngisho naphakathi kobubanzi obungu-360 °ukuze umnikazi abe nezinto zokusekela ezibalulekile uma kwenzeka kwebiwa.
Abasebenzisi abaningi njengamanje banamakhamera wokuqapha axhunywe kuma-alamu abo, ngaphezu kokusebenzisa amasevisi aphakathi njengalawo ahlinzekwa yi- Ama-alamu we-Movistar Prosegur, ngoba bathole ukuthi bangu- isiqeshana esiyisisekelo sokugcina ikhaya lakho noma ibhizinisi livikelekile ngaso sonke isikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, izinkampani ezifana neProsegur zikunikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene lapho ungakhetha imodeli yekhamera yokuqapha evumelana nezidingo zakhoNoma ngabe udinga ukutholwa kokunyakaza emakamelweni amakhulu noma emakamelweni amancane.
Izinto obungazazi mayelana nekhamera yakho yezokuphepha
Ngaphandle kokuthi amakhamera ezokuphepha aziwa kakhulu namuhla futhi asetshenziswa ngokungafani ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezakhiwo, Kunokuzijabulisa okuphathelene nabo okungenzeka ukuthi awukakwazi okwamanje, njengalezo ezishiwo ngezansi:
Phakathi nonyaka Kwasetshenziswa amakhamera ezokuphepha angama-1960 ukuqapha ukwethulwa kwamarokhethi eJalimane. Uhlelo lwayo lwadalwa nguWalter Bruch, ukuze alandele lo mcimbi ngaphandle kokubeka impilo yabasebenzi bawo engcupheni.
Ngezifundo ezenziwa ngo-2014 kwatholakala ukuthi okungenani bekukhona amakhamera ezokuphepha ayizigidi ezingama-245, asebenza ngokuphelele, isibalo, ngokungangabazeki, esande namuhla ngenxa yentuthuko yezobuchwepheshe nokufinyelela kalula i-Inthanethi.
Ubuwazi ukuthi njalo uma usebenzisa i-ATM ubhekelwa ikhamera? Eqinisweni, kunamacala amaningi okukhwabanisa asombululiwe ngenxa yemidwebo eqoshiwe kulawa madivayisi.
Kukhona izindawo lapho kuhlala kubekwa khona amakhamera agcina ukurekhoda amahora angama-24 ngosuku, njengoba kunjalo ngezikhungo zokuthenga, izitolo ezinkulu, amabhange, imigwaqo yomphakathi nemigwaqo emikhulu endaweni yasedolobheni.
Amanye amakhamera ezokuphepha asebenza ngaphandle kukagesi, ngalokhu banikezwa ibhethri ebavumela ukuthi bagcine ukurekhoda kungakapheli isikhathi esithile.
Njengamanje, iningi labantu linomakhalekhukhwini obavumela ukuba baxhumeke kwi-Inthanethi, ngalokhu bangafinyelela ezithombeni ezinikezwe ikhamera yabo yokubhekwa ngohlelo olunikezwa ngumhlinzeki wabo we-alamu bona ngesikhathi sangempela okwenzekayo ngaphakathi kwempahla yakho, kusuka noma yikuphi emhlabeni.
Izinzuzo zokusebenzisa ikhamera yokubhekwa
Amakhamera wokuqapha ngamehlo esistimu yakho yokuphepha, banamandla okuthola ukunyakaza ngokusebenzisa izinzwa ezisendaweni ekahle futhi yenza i-alamu isebenze ngesikhathi esifanele ebhaliswe ngaphakathi kwamaphakathi njengeMovistar Prosegur, ozokwazisa iziphathimandla ezihambelanayo ngesikhathi esifushane.
Ukuze ugcine ikhaya lakho noma ibhizinisi lakho liphephile, ungakhetha uhlelo oluhle kakhulu lokuqapha futhi uqiniseke ukuthi lunamakhamera asebenza kahle futhi ngomugqa owenele wokumboza. Kufanele futhi ucabangele izidingo zakho ezithile, ngoba ngokususelwa kuzo uzoqondisa ukukhetha kwekhamera yakho ekahle yokuphepha.
Isibonelo, uzothola ezinye ezinebanga elibanzi njengama-thermals, kepha ikhwalithi yevidiyo ayilihle kakhulu; ngenkathi ezejwayelekile ezinokumbozwa okuncane zikuvumela ukuthi ubone izici zomhlaseli ngokuningiliziwe okukhulu. Ngakolunye uhlangothi, uma usebenzisa i-PTZ ibanga lakho lokubuka liyanwetshwa ngoba linokunyakaza, okwenza kube lula kuwe ukulawula izindawo ezithile.
Futhi, kufanele ukhumbule ukuthi Akufani ukumboza ukuvikelwa kwefulethi, i-chalet noma ihhovisi kunemboni, lapho-ke uzodinga ukukhetha inani lamakhamera adingekayo ukuqinisekisa ukutholakala okuhlukahlukene.
Ngokuvamile, izinhlelo zekhamera yokuqapha ividiyo ziyatholakala ngaphakathi kwama-alamu kits njengalawo avela eMovistar Prosegur Alarmas, afaka zonke izesekeli ezibalulekile zokufakwa kwalolu hlelo lwezokuphepha futhi anikeze ukuxhumana okuhlala njalo nesiteshi sakho sokwamukela esimaphakathi. , ubheke ikhaya lakho noma ibhizinisi lakho amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezingama-365 ngonyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Izinto ezi-5 obungazi ngekhamera yakho yezokuphepha
I-LG Tone Free HBS-FN7: Ukukhanselwa Komsindo Osebenzayo nokuningi Okuningi